Muxuu Golaha Ammaanka QM kala hadlayaa wasiirka arrimaha dibadda Somalia? - Caasimada Online
Home Warar Muxuu Golaha Ammaanka QM kala hadlayaa wasiirka arrimaha dibadda Somalia?
Muxuu Golaha Ammaanka QM kala hadlayaa wasiirka arrimaha dibadda Somalia?
Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirka Arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirisaaq Maxamuud oo ku sugan dalka Mareykanka ayaa si hordhac ah u sheegay inuu la kulmayo xoghayaha qaramada Midoobay Antonio Guterres iyo 15-ka xubnood ee golaha ammaanka.
Ujeedka kulanka uu wasiirka la yeelanayo xubnaha golaha ammaanka waxaa lagu sifeeyay inuu usoo bandhigayo Xaaladda xiligaan ka taagan gudaha Soomaaliya isla markaana uu ka dhageysan doono talooyinka ay usoo jeediyaan.
Wasiirka wuxuu sheegay inuu la kulmay qaar ka mid ah safiirada wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya, waxeyna ka wada hadleen xaaladda uu dalka ku jiro iyo isbadalka sanadka cusub.
Doorashada Soomaaliya wali muran ayaa ka taagan, waxaa jira waxyaabo badan oo ku hor gudban in loo dareero doorashada oo wakhtigeedii sii dhaafeysa, sidoo kalana beesha caalamka waxey ku baaqday shir ay wali diidan tahay dowladda uu hogaamiyo Farmaajo.